Beddelaan Chiliz In US dollar
Updated 18/01/2020 18:25
Beddelka Chiliz In US dollar. Chiliz qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
100 Chiliz = 1.30 US dollar
Isbeddelka sicirka sarrifka ee Chiliz to US dollar waxay dhacdaa hal jeer maalintii. Qiimaha sarrifka lacagta digital wuxuu leeyahay qiimo celcelis ahaan maalintii. Dhammaan hawlgallada sarrifka crypto waxaa lagu sameeyaa suuqyada sarrifka crypto. 1 Chiliz waa 0.012967 US dollar. 1 Chiliz ayaa hoos u dhacay 0.001151 US dollar. Heerka Chiliz sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -816 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Heerka Sarrifka Chiliz In US dollar
Seddex bilood ka hor, Chiliz waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. Lix bilood ka hor, Chiliz waxaa lagu badali karaa 0 US dollar. Sanad ka hor, Chiliz waxaa lagu badali karaa 0 US dollar. 0% - isbeddelka heerka sarrifka ee Chiliz to US dollar usbuucii. 0% - Isbeddelka heerka sarrifka ee Chiliz ilaa US dollar bishii. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Chiliz to US dollar muddo hal sano ah ayaa 0%.
Chiliz (CHZ) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Chiliz ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican Chiliz qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Chiliz maanta.
Binance CHZ/BTC $ 0.007175 $ 352 265 -
BitMax CHZ/BTC $ 0.007499 $ 155 451 -
Bilaxy CHZ/ETH $ 0.007082 $ 575 378 -
WazirX CHZ/USDT $ 0.007517 $ 956 -
Binance CHZ/USDT $ 0.007169 $ 140 511 -
BitMax CHZ/USDT $ 0.007495 $ 94 690 -
KuCoin CHZ/BTC $ 0.007463 $ 7 107 -
Binance DEX CHZ/BNB $ 0.007505 $ 575 -
Bilaxy CHZ/USDT $ 0.007175 $ 115 174 -
Isbedelka Chiliz ugu fiican dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Chiliz US dollar
Chiliz (CHZ) In US dollar (USD)
100 Chiliz 1.30 US dollar
500 Chiliz 6.48 US dollar
1 000 Chiliz 12.97 US dollar
2 500 Chiliz 32.42 US dollar
5 000 Chiliz 64.83 US dollar
10 000 Chiliz 129.67 US dollar
25 000 Chiliz 324.16 US dollar
50 000 Chiliz 648.33 US dollar
Hadaad leedahay 0.13 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 10 Chiliz. Hadaad leedahay 0.32 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 25 Chiliz. Waad ku iibin kartaa 50 Chiliz ee loogu talagalay 0.65 US dollar . Hadaad leedahay 1.30 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu iibin karaa 100 Chiliz. Hadaad leedahay 3.24 US dollar, ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 250 Chiliz. Waad ka iibsan kartaa 500 Chiliz ee loogu talagalay 6.48 US dollar .
Chiliz (CHZ) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan CHZ/USDT maanta 18 January 2020
28/11/2019 0.012967 -
Maanta maanta 28 November 2019, 1 Chiliz kharashyada 0.012967 US dollar.
Chiliz (CHZ) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Chiliz iyo US dollar
Chiliz codka lacagta digital CHZ. Chiliz ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 03/11/2019.